मोटोपना घटाउन के गर्ने ? – मोफसल खबर
मोटोपना घटाउन के गर्ने ?
कुनै पनि मानिसलाई मोटोपनको सिकार हुन मन हुदैन । मोटोपनाले शरीरमा बिरामीको समस्या त ल्याउछ नै व्यक्तित्व पनि खराब बनाउदछ । तौल कम गर्नको लागि मानिसहरु अनेक प्रकारको उपाय अपनाउँछन् । यद्यपि गर्मी सिजनमा तौल घटाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा छ । त्यसैले यस सिजनमा तौल कम गर्न बढी प्रयास गर्नुहोस् ।